सरकार र सिके राउत विचको सम्झौतामा न्यायपालिकाको भूमिका शंकास्पद: डा. कोइराला - www.biratsandesh.com
सरकार र सिके राउत विचको सम्झौतामा न्यायपालिकाको भूमिका शंकास्पद: डा. कोइराला
विराटनगर, १ चैत । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डा.शेखर कोइरालाले स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन (सिके राउत्त) सँग सरकार विच भएको सम्झौतमा न्यायपालिकाको शंकास्पद भूमिका रहेको खुलासा गरेका छन । सरकारले न्यायपालिकालाई प्रभावमा पारेर देशमा फेरी गृहयूद्ध निम्ताउन खोजेको उनको आरोप छ ।
नेपाल टेलिकम वर्कस यूनियन प्रदेश न १ को १२औ क्षेत्रीय अबिधेशनलाई शुक्रवार विराटनगरमा सम्बोधन गर्दै डा.कोइरालाले भने “यो सम्झौताले न्याय क्षेत्रको बिश्वसनियता माथी प्रश्न खडा गराएको छ ।” मैले जनतालाई भन्नै पर्छ डा.कोइरालाले भने ,“ राउत्तसँगको सम्झौता न्यायपालिका र सरकारको ग्रान्ड डिजाइनमा आएको हो । ” अदालतले छोडेको भोलीपल्टै आफ्नै पार्टीका साथीहरूलाई सुइको समेत नदिई कसरी सहमति हुन्छ उनले प्रश्न गर्दै भने ,“ यो घटनाले न्यायपालिका निष्पक्ष बन्न सकेन । ”
मधेशलाई बेग्लै देश बनाउँछु भन्दै हिडेका राउत्तसँग सम्झौत गर्ने र विप्लब माओवादीलाई प्रतिवन्ध लगाउने सरकारको रवैयाले देश फेरी गृहयूद्धको भूमरीमा फसेको कोइरालाले बताए । सरकारले बिप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाएर ठूलो भूल गरेको उनको कथन थियो । कांग्रेसले पनि कुनै बेला प्रचण्ड, बाबुराम र बादललाई आतंककारी घोषण गरेको स्मरण गर्दै उनले भने , आतंकारी घोषणा गर्दै र प्रतिबन्ध लगाउदैमा निकास निस्कदैन । तत्कालीन माओवादीलाई कांग्रेसले सहमति र सहकार्य गरेरै राजनीति मूल धारमा ल्याएको स्मरण गर्दै उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बिप्लवलाई प्रतिबन्ध होइन वार्तामा ल्याउन सुझाव दिए । अहिलेको राजनीतिक समाधान भनेकै बार्ता हो उनले भने , प्रतिबन्ध र आतंककारी घोषणा गरेर समस्याको समाधान नहुने हुँदा बिप्लवलाई यथासक्य चाडो वार्ताको टेवुलमा ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीसँग आग्रह गरे ।
मधेशमा जनअभिमत गरेर जाने गरि सम्झौता गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई टुक्राउन खोजेको उनको आरोप छ । जनअभिमत भनेकै जनमत संग्रह हो कोइरालाले भने , “यो लाटोले समेत बुझ्ने भाषा हो । ” सिके राउत्तसँग जस्तो सुकै सहमति गरे पनि सरकारले उसका हरेक गतिविधि नियालेर जानुपर्ने कोइरालाले बताए । जनकपुरमा पुग्दा राउत्तका कार्यकर्ताले एशियाकै अर्को नयाँ देश गठन भएको नाराले देशको सर्वभौमसत्ता र अखण्डतामा ठेस पुगेको उनले दुखेसो गरे ।
कोइरालाले ओली नेतृत्वको सरकारले दण्डहिनतालाई प्रोत्सहान दिएको आरोप लगाए । “ यो सरकार संयमित भएर अघि बढन सकेन भने देश फेरी द्धन्द्धमा फसेर पुरानै स्थिति दोहरिन सक्ने उनको ठोकुवा छ ।” वर्तमान सरकार संघीयता समाप्त पारेर अहिलेको संविद्यान निस्कृय पार्ने खेल रचिरहेको उल्लेख गर्दै कोइरालाले कांग्रेसका कार्यकर्तालाई सरकारको संघीयता विरोधी अभियानमा खरो रूपमा उत्रन आग्रह गरे ।
प्रकाशित मिति : १ चैत्र २०७५, शुक्रबार १५:०८
प्रचण्डको बोली फेरियो, भन्छन्: ‘ओलीजी नै पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्री’
दुई सातादेखि सोलुखुम्बु सदरमुकाम अन्धकारमा
नव वर्ष २०७५ प्रारम्भ
नगरपालिका कर्मचारी एशोसिएशनको प्रदेश संयोजकमा यादव मनोनित
दर्शकलाई रुवाउँदै सकियो मुनामदनको मञ्चन
भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री वाजपेयीको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि, धर्मपुत्री नमिताले दिइन् दागबत्ती
उदयपुरमा बोलेरो जिप दुर्घटना, एकको मृत्यु, १० घाइते
कोशी विद्या मन्दिरमा सिंगिङ आइडल
असिनाले सेताम्मै बन्यो चतराधाम (भिडियो सहित )